Arenti Cloud waxay duubi doontaa goosgoosyada dhacdooyinka marka ogaanshaha dhaqdhaqaaqa la kicinayo, googoynta dhacdadu waxay noqon doontaa ilaa 3 daqiiqo (iyadoo ku xiran moodooyinka). Waxaad heli doontaa bil inaad ku isticmaasho adeeggan.
3 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 2.99
7 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 4.99
30-Day history Taariikhda fiidiyaha） $ 15.99
Arenti Cloud waxay duubi doontaa goosgoosyada dhacdooyinka marka ogaanshaha dhaqdhaqaaqa la kicinayo, googoynta dhacdadu waxay noqon doontaa ilaa 3 daqiiqo (iyadoo ku xiran moodooyinka). Waxaad lahaan doontaa 3 bilood si aad u isticmaasho adeeggan.
3 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 8.37
7 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 14.37
30-Day history Taariikhda fiidiyaha） $ 47.37
Arenti Cloud waxay duubi doontaa goosgoosyada dhacdooyinka marka ogaanshaha dhaqdhaqaaqa la kicinayo, googoynta dhacdadu waxay noqon doontaa ilaa 3 daqiiqo (iyadoo ku xiran moodooyinka). Waxaad yeelan doontaa 1 sano si aad u isticmaasho adeeggan.
3 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 30.00
7 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 50.00
30-Day history Taariikhda fiidiyaha） $ 160.00
Arenti Cloud sidoo kale waxay bixisaa ikhtiyaarro duubis maalin-buuxa ah, duubista 24/7 (marka laga reebo kamaradda batteriga iyo gambaleelka fiidiyaha). Waxaad heli doontaa bil inaad ku isticmaasho adeeggan.
3 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 3.99
7 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 6.99
30-Day history Taariikhda fiidiyaha） $ 21.99
Arenti Cloud sidoo kale waxay bixisaa ikhtiyaarro duubis maalin-buuxa ah, duubista 24/7 (marka laga reebo kamaradda batteriga iyo gambaleelka fiidiyaha). Waxaad lahaan doontaa 3 bilood si aad u isticmaasho adeeggan.
3 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 11.37
7 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 20.37
30-Day history Taariikhda fiidiyaha） $ 65.37
Arenti Cloud sidoo kale waxay bixisaa ikhtiyaarro duubis maalin-buuxa ah, duubista 24/7 (marka laga reebo kamaradda batteriga iyo gambaleelka fiidiyaha). Waxaad yeelan doontaa 1 sano si aad u isticmaasho adeeggan.
3 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 40.00
7 - Maalinta history Taariikhda fiidiyaha） $ 70.00
30-Day history Taariikhda fiidiyowga） $ 220.00
Dadaallada Arenti ee Ilaalinta Qarsoodiga
Arenti had iyo jeer waxay muhiimad siisaa ilaalinta asturnaanta macaamilka. Maadaama Arenti uu dhashay, waxaan ku dadaalnaa dhinac kasta oo ka mid ah marxaladda horumarinta, oo ay ku jiraan aaladda, appka, iyo server -ka.
Kaameeradeena waxaa loogu talagalay hab sir ah iyadoo la adeegsanayo algorithm AES-128. Dhammaan xogta waa la qarin doonaa, oo ay ku jiraan farriimaha dhacdooyinka, amarrada xakamaynta, qulqulka muuqaalka tooska ah, kaydinta daruuraha, iyo kaydinta maxalliga ah.
AES-128 waa algorithm qarsoodi ah oo heer sare ah oo horumarsan, oo warshadu si weyn u aqoonsan tahay.
Dhammaan kaamirooyinku waxay taageeraan habka asturnaanta. Isticmaalayaashu waxay dejin karaan heerka shididda/demiyeyaasha ee muraayadda. Markay xaaladdu degantahay, wax xog ah lagama wareejin doono aaladda. Waqtigan xaadirka ah, qayb ka mid ah moodooyinka ayaa leh shaqo dabool jireed, muraayaddu waxay duubi doontaa qarsoodi. Tani waxay ogaataa ilaalinta gaarka ah ee buuxda.
Dhexgalka dhammaystiran ee ka dhexeeya aaladda, serverka, iyo abka, dhammaan gudbinta xogta waxaa lagu sameeyaa HTTPS, oo lagu xoojiyo algorithm SSL, oo ​​ay ku jiraan qulqulka, farriinta dhacdada, iyo amarrada xakamaynta.
SSL waa halbeegga warshadaha ee isgaarsiinta sugan, kaas oo si wax ku ool ah u sugi kara gudbinta xogta ee shabakadda.
Waxaan sidoo kale ku darnaa xaqiijinta furaha gudbinta P2P ee loo adeegsado qulqulka, waxaan sii xoojineynaa amniga xogta.
Waxaan u doorannaa AWS inay tahay lammaanaha adeegga daruuriga ah oo keliya. Adeegga oo dhan waxaa lagu dhisay AWS, ma jiro alaab -qeybiye kale oo daruur ah maaddaama AWS ay tahay tan ugu caansan warshadaha, bixiyaha adeegga daruuraha ee amniga iyo ilaalinta asturnaanta.
Isticmaalayaasha, xogta ugu muhiimsan waa aqoonsiga koontada. Adeegaha, aqoonsiga koontada waxaa lagu qoraa AES-128.
Waxaan gaarsiineynaa adeegayaasha AWS adduunka oo dhan. Saddex server ayaa si gooni ah ugu yaal Maraykanka, Jarmalka, iyo Shiinaha, iyagoo u adeegaya gobollada caalamka. Xogta gobol kasta waxaa lagu keydin doonaa oo keliya serverka u dhigma.
Xaqiijinta laba-tallaabo ayaa loo adeegsadaa gelitaanka Arenti App. Marka isticmaale wax ka beddelo aqoonsiga koontada ama gelitaanka fog ayaa dhacaya, koodhka xaqiijinta waxaa loo diri doonaa xaqiijin laba-tallaabo ah.
Dhanka kale, Arenti App wuxuu aruuriyaa xogta mobilada oo si adag u qancisa shuruudaha sharciga guud ee caalamiga ah.